Boqoshaada la cuni karo ee Ukraine: TOP-15
Qaar badan oo ka mid ah jacaylka macaamiisha ah waxay doorbidaan inay iyaga isu soo aruuriyaan, laakiin kaliya khudaarta soo-saarka leh ee qibrada leh waxay u sheegi karaan in la cuni karo laga bilaabo bilaa-boodka aynaan tagin isbitaal leh sumo. Ka dib markaad akhriso maqaalkan, waxaad ogaan kartaa waxa wakiillada ugu caansan ee boqoshaada ammaan ah u eg iyo sida loo kala saaro boqoshaada sunta ah. Cuntada cad Cagaarka cad (ama sida loogu yeedho - boletus) - boqorka boqoshaada oo dhan waxaa loogu yeedhaa sababtoo ah qashirkiisa cajiibka ah, taas oo marka cunto karintu noqoto midab cad cad.
Boletus delicious marinated for jiilaalka: cunto kariska
Butters waxay ku haboontahay in ay ka fiican yihiin noocyada kale ee boqoshaada. Dhadhanka subagga ka dib marinating waa ka raaxo badan ka dib markii wax kasta oo kale. Dumarka oo leh farxad aad u ballaadhan waxay diyaariyaan diyaar garowga noocaas ah jiilaalka. Maanta, waxaa jira daraasado cunto ah oo la marin karo saliid. Waxa ugu muhiimsan waa in la waafajiyo tiknoolojiyada saxda ah ee diyaarinta boqoshaada iyo tixgelinta qaar ka mid ah sifooyinka qaar ee pickling.
Waa maxay isticmaalka iyo sida loo dhaqsiyo iyo sida ugu dhaqsaha badan leh boqoshaada cusbada leh ee jiilaalka
Ryzhiki - boqoshaada caan ah oo lagu qadariyo qaboojiyaha dhadhanka iyo farbarashada wax lagu karsado. Waxay la shiilan yihiin, laleeyeen, la kariyay oo la cusbeynayaa. Maanta waxaan ka hadli doonaa siyaabaha salpingeynta wax soo saarka waxtar leh jiilaalka. Ku saabsan muuqaalka iyo dhadhanka: Mushinka wuxuu leeyahay midab casaan leh oo casaan ah ama casaan ah, mararka qaarkood waxaa jira cagaar cagaaran oo ku yaal daboolka.
Mukor Mukk: sharax, codsi wax ku ool ah. Waa maxay khatarta fungus
Markii ay heleen rooti caan ah miiska, dad yar ayaa ku farxi doona. Dadka intooda badan, tani waa arrin aan fiicnayn, laakiin wacyigelin la yaqaan. Inkasta oo xaqiiqda ah caaryada cad, ama boqoshaada wax yeelada, ma aha mid fudud sida ay u muuqato in jaleecada hore. Maanta adduunka waxaa jira ilaa 60 nooc oo dhaqankan ah. Qaar ka mid ah waxay barteen inay ka shaqeeyaan shaqadooda, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa khatarta u leh caafimaadka.
Musqulaha Lafaha: dabeecada, deegaanka, cuntada sida caadiga ah
Socdaalka kaynta xilliga dayrta waxay fursad u helayaan inay nuugaan hawo nadiif ah, ku raaxaystaan ​​quruxda dabeecadda iyo soo ururinta boqoshaada. Ku aadida "ugaadhsiga aamusnaanta", waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto habka bacriminta. Maqaalkeena waxaan ka wada hadli doonaa mid ka mid ah - Polish. Waxyaabaha la cuni karo ama aan laheyn Magacyo badan - tani waa cambe, iyo jimicsi, iyo sidoo kale "boqorka of mokhovikov" ama kalluunka.
Sidee noocyada kala duwan ee amanitas u eg yihiin
Qof kastaa waa yaqaanaa boqoshaada sida amanita. Они встречаются в литературе, в детских сказках. Мухомор с красной шляпкой является самым узнаваемым грибом в мире.Maantana waxaan ku soo dhaweyneynaa noocyada kala duwan ee mushaharka, kala hadal muuqaalka, sidoo kale waxaan kuu sheegi doonaa meesha ay ku koraan. Soo ogow haddii ay jiraan noocyo la cuni karo.
Ryzhiki waa mid ka mid ah boqoshaada ugu caansan ee latitudes ah - ma aha oo kaliya sifooyinka wanaagsan ee dhadhanka, laakiin sidoo kale leedahay guryaha faa'iido leh. Halka ay ku koraan, noocyada ay jiraan, sida loo ururiyo loona soo ururiyo boqoshaada, aynu ka fekerno faahfaahin dheeraad ah. Noocyada ugu caansan Ryzhiki waxay ka mid yihiin wakiilada jilitaanka Mlechnik, oo ay ku jiraan 7 subaxyo - casaan, salmon, alpine iyo kuwo kale.
Dubovik caadiga ah: sharaxaad, meelaha koritaanka, mataanaha, cunto karinta
Poddubovik, ama mushkiladda dubovik, waa noocyo dhif ah oo koraaya oo keliya xaaladaha qaarkood. Halkee laga soo uruuriyaa likaha sida, sida ay u egyihiin, sida loo nadiifiyo subdubka iyo diyaarinta suxuunta dhadhan fiican leh - aynu ka eegno muuqaal dhow. Waxyaabaha la cuni karo ama aan ahayn Miisaankaas caleemaha Boletus wuxuu ku xiran yahay qaybta boqoshaada xaalad ahaan la cuni karo.
Boqoshaada la cuni karo - liis leh magacyo, sharaxaad, sawiro
Qof kasta oo aan fahmin boqoshaada, waxay ku xaddidan tahay iibsigooda dukaanka. Ka dib oo dhan, champignons iyo boqoshaada lohod, koray qorraxda macmalka, dhiiri kalsooni badan ka badan hadiyadaha aan la garanayn. Hase yeeshe, dadka wax soo saarka ah ee roodhiga ah ma awoodi doonaan inay ku qanacaan dhadhanka miraha oo aan ahayn nuugista cirbadaha oo aan la maydhin subaga subaxda.
Sawir iyo sharaxaad of boqoshaada ee Crimea
Xeebta Crimea waxay caan ku tahay tiro badan oo ah boqoshaada kala duwan, kuwaas oo aan u muuqan oo keliya kaymaha, laakiin sidoo kale kudheerka, oo ku yaal cawska agagaarka degsiimooyinka, xuddunka kaynta, dhulka yaryar, goobaha buuraha. Xaaladaha cimilada ee xuduudaha ayaa gacan ka geysta xaqiiqda ah in halkan xilligan xorta ah uu socdo muddo ka badan lix bilood, laga bilaabo guga horraanta iyo dhamaadka xilliga dayrta.
Sidee loo nadiifiyaa boqoshaada oo ma u baahan yihiin in la dhaqo?
Waxaa ka mid ah siyaabo badan oo cunnooyin ah ee cuntada lagu kariyo ka hor karinta, mowduucyada ugu murugsan waa daaweynta ka hortagga champignons. Ugu yaraan hal mar, laakiin waa la yaabay: waa in la maydiyaa iyo sida loo diyaariyo kaydinta ama diyaarinta suxuunta kala duwan. Jawaabaha su'aalaha hadda jira ee ku saabsan habka saxda ah ee boqoshaada ayaa laga heli karaa waxyaabaha la soo bandhigay.
Ilaalinta xilliga qaboobaha xilliga jiilaalka: Iskuduwaha qashinka
Caanaha guriga ayaa ah hab weyn oo lagu barbardhigo miiska jiilaalka oo la heli karo oo la jaan qaadi karo oo la jecel yahay. Waxaan bixinaa si aan u karsado khudaar qasacadaysan oo ka sameysan agaric malab ah. Dhadhanka badeecadda Badeecadda Honey waa badeeco yar oo calorie ah oo leh borootiin qiimo leh, sida chitin, fitamiin B, fiyuusta cuntada, iyo walxaha raadraaca.
Qeexida khadadka boqoshaada
Bishii Abriil ilaa Maajo, qashinka laynka ayaa ka muuqda kaynta. Waxay noqon karaan kuwo aad u qiimo badan oo lagu qiimeeyo "aamusnaan aamusan". Sidee iyo meesha aad ka raadin lahayd khadadka, sida loo diyaariyo oo aan loo helin sunta, iyo sidoo kale cuntooyinka suxuunta - ee qodobkan. Qeexidda Botanikada Khadadka waxay tixraacayaan cirifka fungi marsupial of Family Discinaceae (Discinaceae).
Sida loo ururiyo iyo sida loo kariyo sulfur jilicsan jaalaha ah
Dad badan ayaa jecel in ay doortaan boqoshaada waxayna kariyaan noocyo kala duwan oo suxuun leh. Hadiyadan dabiiciga ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad si weyn u ballaariso suurtagalinta cunnada. Ma aha in qof kastaa ogyahay habka loogu talagalay qalabka baaruudda-jaalaha ah, halkaasoo uu korayo, sida loo ururiyo. Waxaan ka baran karnaa waxyaabo badan oo ku saabsan guryaha iyo hababka diyaarinta. Qeexitaan iyo sawirro Sulfurous Cranberry waa xubin ka mid ah qoyska Poliporov.
Of noocyo badan oo boqoshaada govorushka, govorushka weyn oo la cuni karo u qalmaan taxadar gaar ah, leh muuqaal xiiso iyo tiro muuqaal wanaagsan. Qeexitaanka iyo sawirka feerka Govorushka fungus (sida waafaqsan cilmiga sayniska ee Leucopaxillus giganteus ama Leusopaxillus weyn) ayaa iska leh caanaha Belosvinushka waxayna qayb ka tahay qooyska Row.
Waa maxay boqoshaada koray gobolka Leningrad
Xilliga boqoshaada ee gobolka Leningrad wuxuu bilaabmaa ka dib roobabkii ugu horreeyay, iyo tirada ugu badan ee ururinta waa bisha Oktoobar. Waxaad ku soo ururin kartaa meelo aan la fileynin. Если вы заядлый грибник, то хватит пары мест, где можно набрать такое количество, чтобы не только полакомиться в данный момент, но и заготовить впрок.
Maqaarka Fungus Winter (Flammulin lakabada jilibka): sharaxaadda, cuntada, sawirrada
Inkasta oo ay caado u tahay in la yiraahdo xilliga jiilaalka maaha wakhtigii la soo ururin lahaa boqoshaada, laakiin waqtigaan sanadka waxaa jira boqoshaada kaynta oo aan ka baqin cimilada qabow. Tixgeli ururinta iyo siyaabaha waxtarka leh, iyo sidoo kale isticmaalka daawada dawooyinka jiilaalka iyo karinta. Qeexida moolka flammulin xilliga qaboobaha, ama aboorka jiilaalka, waa miro yar oo la cuni karo oo ka yimaada qoyska Ryadovkov oo u egyahay mid la mid ah agarics malab.
Mushaharaha la cuni karo waxay koraan xilliga dayrta
Dayrta waxay bixisaa boqollaal kala duwan. Waxaa laga soo qaadan karaa laga bilaabo Ogoosto illaa Nofeembar. Waxay ka fiican yihiin kuwa la kaydiyo, tusaale ahaan, xagaaga. Waxaa ka mid ah waxaa jira badan oo dhadhan fiican leh, ku haboon ujeedooyin kala duwan oo cunno. Waxaan kugula talinaynaa inaad barato kuwa ugu caansan. Geedka miraha ah ee aan soo saarno waa in aynu bilawno aqoon isweydaarsi leh oo leh wakiil ka mid ah boqortooyada mantarka, taas oo dadku si fiican u yaqaan "dadka boqosha boqoshaada", maaddaama ay tahay tan ugu qiimaha badnaanta nafaqada iyo dhadhanka.
Ka shaqeynta caleemaha jaalaha ah: waa la cuni karaa ama maahan
Rowing waxay leeyihiin tayada qiimaha badan. Laakiin maaddaama ay yihiin fikrad wadajir ah oo sharraxaya caan ka dhan ah boqoshaada la cuni karo iyo sunta leh, dadka badidood way dhaafayaan. Xitaa roogaga soo qaado khibradaha miiran had iyo jeer ma khatar galiyaan inay soo aruuriyaan koobab noocyada kaynta ah, iyagoo ka cabsanaya inay ku wareeraan walaalaha walaalaha ah.